Frida Aasen ဝတ်လစ်စလစ်, Bikini နှင့် Sexy Pics စုဆောင်းခြင်း - ဝတ်လစ်စလစ် Celebs
Frida Aasen ဝတ်လစ်စလစ်, Bikini နှင့် Sexy Pics စုဆောင်းခြင်း
အိုလူသား၊ ဒီမှာလှလှပပအလှဆုံးမိန်းကလေးတစ် ဦး၊ မော်ဒယ်လ်နှင့်ဗစ်တိုးရီးယား၏လျှို့ဝှက်အိန်ဂျယ်ဖရီဒါ Aasen ဝတ်လစ်စလစ်နှင့် sexy ဓာတ်ပုံများပါ! သူမသည် topless ခန္ဓာကိုယ်, ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ပုံနှင့်ပိုပြီးအများကြီးပြရုံ scroll နှင့်ပျော်မွေ့!
Frida Aasen (အသက် ၂၅ နှစ်) သည်လမ်းလျှောက်ရာတွင်လူသိအများဆုံးနော်ဝေဖက်ရှင်မော်ဒယ်ဖြစ်သည် ဗစ်တိုးရီးယားရဲ့လျှို့ဝှက်ဖက်ရှင်ပြ သူမသည်မြင်းစီးခြင်းပြိုင်ပွဲများတွင်ဖဲကြိုးများစွာကိုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။မော်ဒယ်အေးဂျင့် Donna Ioanna ကသူမကုန်တိုက်မှာဈေးဝယ်နေတုန်းသူမကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ Frida သည် Carine Roitfeld ၏မဂ္ဂဇင်း CR ဖက်ရှင်စာအုပ်၏ပထမဆုံးထုတ်ဝေမှုတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်သူမကို Vogue နှင့် Martha Hunt နှင့်အတူစောင့်ကြည့်ရမည့်မျက်နှာအဖြစ်ရည်ညွှန်းခဲ့သည် Kelly Gale, ဝတ်လစ်စလစ်နှင့်လိင်တိပ်ခွေ ငါတို့မှာရှိတယ်။ သူမသည် Tory Burch၊ Victoria's Secret၊ H&M၊ Nasty Gal, Dsquared²နှင့် Saks Fifth Avenue တို့အတွက်ကြော်ငြာများတွင်ထင်ရှားသည်။ Aasen သည် Prada, Loewe, Louis Vuitton, Fendi, Blumarine, Just Cavalli, Salvatore Ferragamo, DKNY, Derek Lam, Carolina Herrera, Anna Sui, Cushnie et Ochs, Tory Burch တို့၏လေယာဉ်ပြေးလမ်းများတွင်လျှောက်လှမ်းသည်။
Frida Aasen ဝတ်လစ်စလစ် pics
ပူပြင်းတဲ့ဖက်ရှင်မော်ဒယ်နှင့် VS gal Frida Aasen အဝတ်အချည်းစည်း, topless နှင့်ပူဓာတ်ပုံများကိုစစ်ဆေးပါ။ သူမသည်ကျွန်တော်တို့ကိုဝတ်လစ်စလစ် Boob နှင့် pussy ပုံများစွာကိုပေးထားသော်လည်းသူမကကျွန်ုပ်တို့အားသီးသန့်ဘာမှမပေးခဲ့ပါ။ ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ဗွီဒီယိုတွေပေါက်ကြားချင်တယ်၊ မဂ္ဂဇင်းပုံတွေနဲ့သူမဓာတ်ပုံရိုက်တာတွေရခဲ့တယ်။ စောင့်ပါသူမကျွန်တော်တို့ကိုနို့သီးခေါငျး, tits နှင့် pussy အပ်ပေးတော်မူ၏။ ဒါ့အပြင်မြည်း!
Frida Aasen bikini pics
Frida Aasen နှင့် Herieth Paul တို့ကိုမော်ဒယ်များကိုကမ်းခြေတွင်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ မိုင်ယာမီကမ်းခြေကိုရောက်တဲ့အခါသူတို့ဟာ skimpy bikinis တွေ ၀ တ်ဆင်ထားတယ်။ သူမ၏ sexy ပုံကိုပြနေစဉ်တွင် Frida သည်မြည်းများနှင့် Boob များကိုပြသခဲ့သည်။
အနီရောင်ကော်ဇောပေါ်က sexy Frida Aasen
လှပသောမော်ဒယ် Frida Aasen သည်အနီရောင်ကော်ဇောတွင်ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့သည်။ သူမသည်အနောက်ဟောလိဝုဒ်ရှိ Elton John AIDS Foundation Academy Awards Viewing Party တွင်စိန်ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ခဲ့သည်။ Frida ကရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းပြီးပရိသတ်များနှင့် paparazzi အတွက်သူမ၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုပြသခဲ့သည်။
Ashley ဂရေဟမ်ဝတ်လစ်စလစ် pics
kaley cuoco ဓါတ်ပုံတွေပေါက်ကြား
ဝတ်လစ်စလစ်ဓာတ်ပုံများ Jennifer ချစ်ခြင်းမေတ္တာဝစ်